Njengoko umfanekiso ophezulu ubonisiwe, mhlawumbi indawo yakho iyafana nale, ayiqhelekanga kwaye ufuna ukuyilwa ngesitayile esahlukileyo.Kodwa umzi-mveliso we-WPC osoloko ekuxelela ukuba baya kuvelisa imveliso enye okanye ezimbini kunye nobude obude. ezi, unokucinga ...
Ezinye iingcebiso malunga neWPC
Imveliso yeplastiki yeplastiki (WPC) iyonwabela izinto zomthi kunye nezinto zepolymer, kodwa isimahla kwiziphene zazo.Izinto zeWPC ngamandla aphezulu, kuthintela ukubola, ukumelana nemozulu, ukumelana nesiliphu.Ingasetyenziselwa ukubukeka komhlaba, igadi, izindlu. Kwaye enye indoda yangaphandle.
Ngaba i-WPC decking ingapeyintwa?
Ukuhonjiswa kwe-WPC kufutshane kwiplastiki yeenkuni kunye nokuhonjiswa okungaphezulu, kuya kuthandwa ngakumbi kwihlabathi liphela.Xa sichaza ukuhonjiswa okudityanisiweyo, sihlala sisithi ukuhonjiswa kwe-WPC akukho mzobo, akukho glu, ulondolozo oluphantsi.Kwaye mhlawumbi umntu othile angadida oko Ngaba iibhodi zokuhombisa ze-WPC zinokupeyintwa?
Ukucoca kunye nokugcina umgangatho weWPC
Ukuhonjiswa kwe-WPC kunezibonelelo ezininzi ngaphezulu komgangatho wokhuni olomeleleyo kwaye ngoku kuya kusiba yinto eyaziwayo.Kodwa akukho kubekwa kumgangatho ophezulu we-WPC yi-100% yolondolozo lwasimahla.Xa usetyenziswa, kusadinga ulondolozo rhoqo ukwenza ubomi benkonzo, kodwa ulondolozo Ilula amabala ...
Isikhokelo sokufakwa kweWPC Wall Cladding
I-WPC imfutshane ngeplastiki yeplanga kunye nokudityaniswa, ukumelana nemozulu, ukungangeni manzi, ukuthintela izinambuzane kunye nokugcinwa okuphantsi.Ngenxa yezakhono ezininzi ezilungileyo, abantu abaninzi baya kukhetha iphaneli yodonga lweWPC kuludonga lwabo. Ke mhlawumbi abanye abathengi baya kudida malunga nofakelo, kunye ne-inst ...
Uyifaka njani i-WPC Decking?
I-WPC Decking iyazivuyela izinto zomthi kunye nezinto zepolymer, kodwa isimahla kwiziphene zazo. kulula ukuyifaka ...
I-Co-extrusion, itekhnoloji yakutshanje kuluhlu lweenkuni, le teknoloji iphambili iyadityaniswa kumbindi, izinto zayo ezingaphezulu ezikhethiweyo zezona zinto zinika ibhodi nganye ukusebenza okungafaniyo kunye nokugqwesileyo. Iipropathi zokwambathisa ikepusi zenza ibhodi yokudibanisa izinzile kakhulu, umphezulu awuyi kwanda kwaye ...
I-Lihua WPC 3D ye-Embossed Composite Decking yile mveliso intsha yobuchwephesha, okanye ungayibiza nzulu nge-embossed okanye kwi-super embossed. Itekhnoloji ephambili yinkqubo enzulu ebhalwe ngexesha lokuvelisa.Xa i-extrusion igqityiwe, ipatheni yenye yeebhodi. Itekhnoloji entsha ye-3D embossing ...
I-WPC imfutshane ngomthi weplastiki, izinto eziphambili zi-PE kunye neefayibha zomthi. intle, iyinyani ...
WPC decking edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, WPC decking ngaphandle, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking umgangatho,